Paska 2021 : Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe : Finaritra – FJKM Ambavahadimitafo Paska 2021 : Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe : Finaritra |
Ny hafatr’Andriamanitra amin’izao alahady paska 2021 izao dia ny avy ao amin’ny Matio 28; 1-10 : » 1ARY tamin’ny alin’ny Sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin’ny herinandro, dia avy hizaha ny fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. 2Ary indro, nisy horohorontany mafy; fa nisy anjelin’ny Tompo nidina avy tany an-danitra, dia nankeo ka nanakodia ny vato, dia nipetraka teo amboniny. 3Ary ny fijery azy dia tahaka ny helatra, ary ny fitafiany fotsy tahaka ny orampanala; 4ary ny mpiambina nivadi-po noho ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty.5Ary ny anjely namaly ka nilaza tamin’ny vehivavy hoe: Aza matahotra hianareo; fa fantatro fa Jesosy, Izay efa nohomboana tamin’ny hazofijaliana, no tadiavinareo. 6Tsy ato Izy, fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avia, ka jereo, fa tao no nandrian’ny Tompo. 7Ary mandehana faingana, ka lazao amin’ny mpianany fa efa nitsangana tamin’ny maty Izy; ary, indro, mialoha anareo ho any Galilia Izy; any no hahitanareo Azy; indro, efa nilaza taminareo aho.8Dia niala faingana tamin’ny fasana izy ireo sady natahotra no faly indrindra, dia nihazakazaka hilaza tamin’ny mpianatra. 9Ary, indro, Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe: Finaritra. Ary izy ireo nanatona, dia nihazona ny tongony ka niankohoka teo anatrehany. 10Dia hoy Jesosy taminy: Aza matahotra; fa mandehana, ka asaovy mankany Galilia ny rahalahiko; fa any no hahitany Ahy. «
Ny mpitandrina RANDRIANARISOA Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra